Madaxda DFS oo lagu eedeeyay in shirkii Jabuuti ay ka qayb galeen iyaga oo aan ogayn heshiisyadii horay u dhacay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxda DFS oo lagu eedeeyay in shirkii Jabuuti ay ka qayb galeen iyaga oo aan ogayn heshiisyadii horay u dhacay
Madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya iyo mas’uuliyiintii ku wehliyay shirka Jabuuti todSobaadkii tagay ee ka dhacay ayna wada hadalka kula galeen Soomaaliland ayaa loo jeediyay eedeyn ah, in aysan heyn xogta heshiisyadii horey u dhex maray dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Siyaasiyiin badan ayaa inta aanu shirka furmin waxay sii shaaciyeen dhaliilo uga muuqday habka ay dowladda Soomaaliya u mareysay.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa inta aan la furin shirkii Jabuuti ,wuxuu yiri “Waan jeclaan lahaa in Madaxweynuhu inta aanu ka dhoofin Muqdisho uu la fariisto Madaxweynihii wadahadalka soo billaabay iyo Madaxweynihii halkiisii ka sii waday, oo waliba heshiiskii ugu dambeeyay isla magaalada Djibouti kula saxiixday Somaliland 21 Disembar 2014.
Wuxuu Yuusuf Garaad sii raaciyay,”Labada Madaxweyne ee hore waxay deggan yihiin laba guri oo mid kastaa uu u muuqdo madaarka”.
Laguma khasbana in laga wada qaato ama xataa qaarkeed laga qaato laakiin haddana ilama qummana in ay ku baaqato khibradda iyo xogta ay ka hayaan arrinkaan masiiriga ah.
Intaas kadib waa tii shirka uu Jabuuti ka furmay oo saddexda mas’uul ee dalka ugu sareeya iyo mas’uuliyiin kale u safreen , dhanka Soomaaliland madaxda ugu sareeya ayaa joogtay sidoo kale.
Saacidhii ugu horeeyay ee shirka wararka soo baxay waxay sheegayeen in la isku fahmi waayay, guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo hadlayna, wuxuu sheegay in qodobadii hore loogu heshiiyay aan la fulin.
Cabdiraxmaan Aadan Cusmaan, waa madaxii hab maamuuska madaxtooyada Soomaaliya ee muddadii madaxweyne Xasan Shiikh markii shirka Jabuuti laga soo saaray qodobo aan wax badan ka bedelneyn natiijada shir midkaan lamid ahaa oo 2014-kii dhacay ayuu yiri.
Waxay tani tusaale u tahay, in Faylashii xogta iyo sirta Qaranka ee aan wareejin marnaba dib loo fiirinin, oo la iska laabay, ayuu sheegay Cabdiraxmaan.
Abdiraxmaan ayaa sidoo kale yiri February 16, 2017 galka uu Madaxweyne Xasan Sheekh, wareejiyay waxaa ku jiray lix iyo toban (16) keyd Galeed oo midkasta siro Qaran xambaarsanaa. Galalka ugu muhiimsan waa howlaha Qaran ee socday sida wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, dacwadda soohdinta badda, siraha Qaran ee madaxtooyada yaalay sida Danaha Ethiopia Iyo Kenya, Maamul Goboleedyada, qaab dhismeedka waaxyaha iyo shaqaalaha madaxtooyada.
Inta uusan Madaxweyne Xasan, ku wareejin Madaxweyne Farmaajo, galkasta iyo waxa ku dhex duugan, waxaa warbixinno waafi ah ka siiyey Madaxweyne Farmaajo kaadiriinti gacanta ku haayey howlahaas iyo Madaxweyne Xasan, oo laftiisu kaabayey waxa hal–doorkaas halmaan iyo hafid dhaafsho.
Galka warbixinta wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, waxaa sharaxaad waafi aheyd ka dhiibay Dr. Maxamed Sheekh Cali (Doodishe). Warbixinta uu Dr. Doodishe, siiyey Madaxweyne Farmaajo, ayaa labo qeybood aheyd.
Qeybta koowaad ayaa ku saabsaneed halka ay joogtay qadiyadda Soomaaliya Iyo Somaliland halka qeybta labaadna ay aheyd warbixin kulan dhex maray aqoonyahanno lasoo xulay si ay talo uga dhiibtaan, wadahadallada socday.
Warbixinta oo taabanaysay kulanka aqoonyahanka oo Xamar ka dhacay April 19 – 20, 2016 ayaa waxaa matalaayey Koonfur Dr. Xuseen Warsame, Danjire Yusuf Garaad Cumar, Dr. Maxamed Sheekh Cali, halka dhanka Hargeysa ay matalayeen Dr. Xuseen Bulxan, Xasan Khaliif iyo Maxamuud Cabdi Xaamud (Cawil Nine).
Dhamaan Xogta ku saabsan wada hadalada Somaliland Iyo War murtiyeedyadii lasoo saaray xilli hore waxey kujireen Keyd Galeedyadii aan wareejinay 2017, waxaase cajiib igu noqday in dowlada lasoo gurya noqotay 2020 isla war murtiyeedkii 2014 soo baxay oo isagoo qoraal ah aan wareejinay 2017.
Dhinaca kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii uu Hargeysa ku laabtay wuxuu sheegay in madaxda Soomaaliya aysan waxba kala socon wixii horey loogu hesiiyay.
W/Q Weriye Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim.
Madaxda DFS oo lagu eedeeyay in shirkii Jabuuti ay ka qayb galeen iyaga oo aan ogayn heshiisyadii horay u dhacay was last modified: June 20th, 2020 by Admin